Vaovao - Miverina amin'ny jiro Edison voalohany ary manenjika jiro amin'ny hatsaran'ny madio
Telefaona: +86 18825896865
Tetikasa & Vaovao
Miverina amin'ny jiro Edison voalohany dia manenjika jiro amin'ny hatsaran'ny madio
Sconces amin'ny rindrina
Volana deco manokana
Tady filamentana misy lisitra UL
Swag indostrialy pendant lig ...
UL ES lohateny 20, Lohateny 24 an ...
Ny alokaloka Retro vaovao ...
Tamin'ny taona 1809 dia namorona ny jiro elektrika voalohany i Humphry Davy, mpamorona englisg. Nampifandraisiny ireo tehina vita tamin'ny arina, endrika karbaona singa simika, tamin'ny bateria misy tariby roa. Na dia tsy naharitra ela aza ny jiro, dia nampiseho fa nisy fitaovana lasa nafana be taht rehefa namaky azy ireo ny herinaratra. Tamin'ny taona 1870, nanandrana ny jiro jiro elektrika i Thomas Edison, mpamorona amerikana. Ny endriny dia takelaka fitaratra feno rivotra misy tariby boribory, antsoina hoe filament, izay mifandray amin'ny fikorianan'ny herinaratra fantatra amin'ny anarana hoe onja ankehitriny. Raha natanjaka be ny riaka dia nirehitra fotsy ny filamentana. Ny filamenta taloha dia tsy naharitra, fa tamin'ny 1879 dia namorona filamentana maharitra vita amin'ny karbonina izy.
Betsaka amintsika no mahalala ny tantara etsy ambony, saingy tsy fantatsika hoe ahoana ny endrik'ilay takamoa voalohany.
Eny, saika toa izao.
Hamoaka andian-vokatra tsy manam-paharoa izahay mba hankamamiana ny fahatsiarovana ireo mpamorona takamoa miaraka amina filamenta tarihiny ao anaty izay ampandehanin'ny mpamily DC 24V tarihin'izy ireo.
Manasa antsika namana mpamorona nanao am-pahatsorana an'ity andiany ity izahay.
Eto aho dia mila mitanisa ny làlan'ny famolavolana ho an'ny mpamorona ho referansa amin'ny fijerin'ny indostria.
1.Ny bika fanaovan-jiro, ny takamoa dia tsy mety ho lehibe loatra satria satria raha lehibe loatra dia ho be ny lanjany ary mety tsy hahazaka ny lanja ny faritry ny vera, ka manoro hevitra izahay ny savaivon'ny takamoa tsy mihoatra ny 200mm, ary ny avo tsy mihoatra ny 300mm.
2.Ny firafitra filament marefo, ny firafitry ny filament dia mety misy rafitra arak'izay azonao atao sary. Mila ampifanarahana tsara amin'ny endrika fitaratra izy io.
3.Ny lokon'ny vera, mety ho loko maro vita izy io, toy ny mazava, setroka manetona, varahina, metaly, miloko avana, manjavozavo mavo maitso manga, ho an'ny loko efa nohamarininao tamin'ny vokatrao ankehitriny. toy ny azo atao.
Izahay dia mitarika mpamokatra haingo haingo, manana ny tsipika famokarana fitaratra izahay. Tompony mitsoka fitaratra mahay indrindra.
Ao amin'ny ambaratonga lalina amin'ny indostrian'ny jiro teknolojia tariby isika, manana ny sampana injenieran'ny elektrika misy antsika sy ny fitaovana fitsapana elektrika ary ny efitrano fitsapana.
Mba hahazoana antoka fa ny vokatra mivoatra vaovao rehetra dia manaraka ny fitsipik'i EU sy ny fitsipiky ny Etazonia ary ny lalàna mifehy ny hafa.
Hatsaran-jiro madio no tadiavin'ity tetikasa ity. Te handre feo hafa izahay. Azo antoka fa tobin'ny orinasa OEM ihany izahay any Shina, ka ho anao foana ny hevitrao. Manampy amin'ny fanaovana ny sarinao amin'ny jiro tsara tarehy izahay ho an'ny fampiharana avo lenta.